Buy ဗိုက်​အဆီ​ချေစက်​ (10,000Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
အကောင့်အသစ်ဖွင့်မည် + အခမဲ့ကြော်ငြာထည့်သွင်းပါ
သီချင်း၊ ရုပ်ရှင်နှင့် စာအုပ်များ
လွယ်ကူသော ဈေးဝယ်မှု ကချင်ပြည်နယ်
ဒေါပုံ မွို့နယျ ရန်ကုန်တိုင်း
၀ဘ်ဆိုဒ်တွင်ရှိနေသောရက် : 29ရက်​
ကြည့်သူအရေအတွက်: 56 (+ 1 )
Section Wellness Products
ဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့အခါ ယခုကြော်ငြာကို ipivi.com မှတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ထည့်သွင်းဖော်ပြရန်မမေ့ပါနဲ့။ ဖုန်းမားကက်တင်းသမားများ သို့မဟုတ် တခြားဘယ်ဝဘ်ဆိုက်၏ ကိုယ်စားလှယ်များဆီမှ ဆက်သွယ်မလာစေချင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Iconic liquid highlighter
Model မြင့် X5 အဆီချစက်
သင်​ ဖုန်း​ခေါ်ဆို​သောအခါ ​ကြော်​ငြာအား ipivi တွင်​​တွေ့၍ဖုန်း​ခေါ်​ကြောင်း​ပြော​ပေးပါ။
ရန်ကုန်တိုင်း , ရန်ကုန်
သတိထားပါ။ရောင်းချသူအပေါ်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မရေရာပါက ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်းမပြုပါနဲ့။ငွေမပေးချေမီ ကုန်ပစ္စည်းကိုသေချာစစ်ဆေးပါ။ဈေးပေါလွန်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချမှုတွေကိုမယုံကြည်ပါနဲ့။ "လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ"အကြောင်းမှာ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ipivi.com သည် ကြော်ငြာများကို စုစည်းပေးထားသောနေရာဖြစ်သည်။ မြန်မာပြည်၏ အကြီးဆုံးအွန်လိုင်းရောင်းဝယ်ရေးဈေးကွက် ipivi တွင် သင်သည် တစ်ပတ်ရစ်ကားများ၊ ဖုန်းများ၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ လက်တော့ပ်၊ အဝတ်အစားများ၊ ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းများ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များ စသည်တို့သာမက အခြားများစွာသောပစ္စည်းအမျိးအစားများကိုလည်း ရောင်းချဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကောင်းမွန်သောအလုပ်ကြော်ငြာများကိုရှာဖွေနိုင်ရုံသာမက ဝန်ထမ်းကောင်းများကိုလည်း ရှာဖွေရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ipivi သည် ကျယ်ပြန့်သောအရည်အသွေးမြင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို မြန်မာပြည်သူများအတွက်ပေးနေပြီဖြစ်ပါသည်။ ipivi သည် ပစ္စည်းများအား သင့်တော်သော ဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချဝယ်ယူလိုသူများအတွက် အကောင်းဆုံးကြော်ငြာသင်ပုန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကြော်ငြာများကို အကောင့်ဖန်တီးရန်မလိုအပ်ပဲအခမဲ့တင်နိုင်ပါသည်။ ပစ္စည်းများအား စတိုးဆိုင်များတွင်ရောင်းချနေသောဈေး ထက်လျှော့နည်းစွာဝယ်ယူရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာပြည်သူများအတွက် ပစ္စည်းများအား လျင်မြန်စွာရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်အောင် ကြော်ငြာများအား စုစည်းပေးထားသော မြန်မာပြည်၏အကောင်းဆုံးကြော်ငြာသင်ပုန်း ipivi ဖြစ်ပါသည်။
© 2017-2018 ipivi
Welcome to ipivi!
Facebook ဖြင့် အကောင့်ဝင်မလား
An unexpected error has occurred, please try again later!
သင်သည် ipivi တွင် အောင်မြင်စွာ မှတ်ပုံတင်ပြီးပါပြီ
သင့်ထံ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အတူ အီးမေးလ်ပေးပို့ထားသည်